Barruulee mammiloo (macros) baafata wantootati, sajooleeti, to`annaawwan qaaqati, fi mudatoota LibreOffice keessatti ramaduu ni dandeessa.
LibreOffice keesaan afaanota barreefamaa armaan gadii deggara:
Barruu galfata baafata haaraatti ramaduuf
Meeshaalee - Maamileesi fili, itti aansuun caancala Baafatoota cuqaasi.
Sanduuqa tarree Akaakuu keessaa, galfata "LibreOffice Macros" gadi marfachiisuudhaan bani.
"LibreOffice Macros"f (barruulee galeeloo hirmannaa kee keessaa ijaarsa LibreOffice), "My Macros"f (barruulee galeeloo itti gargaaramaa keessaa), fi galmee ammeef galfata ni ilaalta. Isaan keessaa tokkoo isaanii kan barreefama afaanotaa deeggaru bani.
Barruulee jiran ilaaluuf galfata barreefama afaanii kamiyyuu bani. Barruu kamiyyuu bani.
Tarreen faankishinoota barruu sanduuqa tarree Ajajoota keessaatti mul`ata. Faankishinii fili.
Ramadama baafata haaraa uumuuf Ida'i cuqaasi. Galfatni baafata haaraa sanduuqa tarree Galfatoota keessatti mul`ata.
Barruu furtuu walitti qabaati ramadi
Meeshaalee - Maamileesi - Gabatee Cuqoo fili.
Tarreen faankishinoota barruu sanduuqa tarree Ajajawwan keessaatti mul`ata. Faankishinii kamiyyuu fili.
Qabduu filannoo LibreOfficetiif ykn Writer (fayyadama kamiyyuu kan amma baname) cuqaasi.
Qabduu filannoo kan furtuu haaraa walitti qabaa LibreOffice hundaa ykn galmee mojuulii ammee qofa keessatti argaman qindeessu filuu.
Sanduuqa tarree Furtuulee qaxxaamura irraa furtuu walitti qabaa fili itti aansuun Fooyyessi cuqaasi.
Barruu madatati ramadi
Meeshaalee - Maamileesi - Mudatoota fili.
Sanduuqa tarree Manbarroo keessaa, galfata "LibreOffice Macros" gadi marfachiisuudhaan bani.
Faankishinootni tarree barruu sanduuqa tarree Gochoota Ramadaman keessatti mul`atu. Faankishinii kamiyyuu fili.
LibreOffice keessa ykn galmee ammee keessa olkaa`uuf fili.
Kun dalaga mudata haaraa LibreOffice hundaa keessatti ykn galmeewwan mojuulii ammee qofaa keessatti argaman qindeessa.
Mudata tarree keessaa filuudhaan TOOLE cuqaasi.
Wanta ida'ameef barruu mudatatti ramaduuf
Fakkeenyaaf taattoo, galmee kee keessaa, wanta ida'ame fili.
Sanduuqa tarree Maakroosi keessaa, barruulee galfata LibreOffice bani.
Hirmannaa (barruulee hirmannaa galeeloo ijaarsa LibreOffice kee keessaa)f, itti gargaaramaa (barruulee itti gargaaramaa galeeloo keessaa)f, fi galmee ammeef galfata ilaalta. Afaanota barreefamaa deeggarame ilaaluuf tokkoo isaanii bani.
Faankishinootni tarree barruu sanduuqa tarree Keessa jiraachuu maakroosi keessatti mul`atu. Faankishinii kamiyyuu fili.
Barruu geessituudhaaf ramaduuf
Qaree geessituu keessatti qubachiisi.
Saagi - Geessituufiladhu.
Akka armaan olitti erametti filadhuu ramadi.
Barruu saxaatoodhaaf ramaduuf
Galmee kee keessaa saxaatoo filadhu.
Barruu toowwattuu unkaadhaaf ramaduuf
Toowwattuu unkaa saagi, fakkeenyaaf qabdoo: Qaaqa toowwattuu unkaa bani, sajoo Qabduun Dhiibaacuqaasi, harkisi qabdoo galmeekee irratti bani.
Unka too`annaa filame waliin, unka kamshaa too`annoowwan irratti Too`annaa cuqaasi.
Caancala Mudatoota kan amaloota qaaqa cuqaasi.
Qaaqa iddoo barruu mudata filameetti ramaddu banuuf qabdoota ... tokko cuqaasi.
Qaaqa Bu`uura LibreOffice keessatti barruu to`annaatti ramadi
Qaaqa gulaalaa LibreOffice Basic bani, itti aansuun qaaqa to`annaa waliin irratti uumi.
To'annaa irratti mirga - cuqaasuudhaan, Amaloota fili.
Title is: Barreefama %PRODUCTNAME